Handeha hiaina ny boom-boadin'ny fizahan-tany i Madagasikara amin'ity taona ity
Home » Toerana fitsangatsanganana » Handeha hiaina ny boom-boadin'ny fizahan-tany i Madagasikara amin'ity taona ity
Ny fandinihana vaovao dia manambara izany Madagasikara, izay andriamby ho an'ireo mpizahatany tia natiora noho ny zavamaniry sy ny biby tokana misy azy ary ny toetrany tsy misy fotony sy tena izy, dia toa miaina fisondrotana atosiky ny fizahan-tany amin'ity taona ity. Ny fahatongavan'ireo mpitsidika teto Madagasikara tamin'ny taona 2018 dia 8% raha oharina tamin'ny taona teo aloha ary 19% izany tao anatin'ny dimy volana voalohan'ny taona 2019.
Ny famakiana antsipiriany ny tsena fiaviana folo voalohany eto Madagasikara dia naneho fa tao anatin'ny dimy volana voalohany tamin'ny 2019, dia nisy fihatsarana lehibe teo amin'ny fironana famandrihana. Ny fahatongavan'i Frantsa (tsy anisany ny Nosy La Réunion), izay loharano manan-danja indrindra amin'ny mpitsidika, dia 33% tamin'ny taona 2018; ny tonga avy tany amin'ny 'Nosy Vanilla' (Reunion, Mauritius, Mayotte, Comores ary Seychelles) dia 21% ary avy any Italia dia 37% no niakatra. Ny tsena izay niaina fihenana tamin'ny faran'ny 2017 sy ny fiandohan'ny 2018, Afrika Atsimo, Alemana, Grande-Bretagne ary Sina dia niverina nitombo avokoa. Ny USA, izay tsena fiaviana lehibe faha-8 an'i Madagasikara ihany, no nitohy nihena kanefa nilatsaka ny ambaratongan'ny fihenam-bidy.
Vao mainka mamporisika ny fomba fijery. Ny famandrihana mialoha ho an'ny vanim-potoana Jona-Aogositra (tafiditra) dia 34% alohan'izay tamin'ny fiandohan'ny volana Jona tamin'ny taon-dasa ary avy amin'ny tsena voalohany nipoitra folo dia 38% mialoha.
Ny antony lehibe manosika ny fanatsarana dia ny fitomboan'ny haben'ny seza. Ohatra, nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2019, nitombo 81% ny fahafaha-nana ho any Eropa amin'ny Air Madagascar, mpitatitra lehibe indrindra eto amin'ny nosy, miaraka amin'ny ampahatelon'ny tsena. Tamin'ity volana jona ity dia nanomboka serivisy indroa isan-kerinandro tany Johannesburg ny zotram-pitaterana an'habakabaka. Ny zotram-piaramanidina lehibe hafa toa ny Air Austral na Air Mauritius koa dia mampitombo ny fahafaha-manaony eto Madagasikara, avy amin'ny 23.6% ary 3.8% ho an'ny Janoary hatramin'ny septambra, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Tamin'ny taona 2018, ny haben'ny seza iraisam-pirenena dia nitombo 1.8% fotsiny.
Boda Narijao, filohan'ny Birao nasionalista mpizahatany eto madagasikara, hoy izy: "Data tena mampahery ity, izay manamarina ireo hetsika vao haingana nataontsika mba hahasarika kokoa an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena i Madagasikara."
Maherin'ny telo ampahefatry ny mpitsidika an'i Madagascar ny mpizahatany izay mijanona mandritra ny roa herinandro mahery ary 19% mijanona maharitra iray volana. Ity halavany maharitra ity dia mpamily fitomboana ara-toekarena ho any amin'ny toerana haleha.
Raha ny filazan'ny World Travel & Tourism Council, ny fizahantany dia tompon'andraikitra amin'ny 15.7% amin'ny harinkarena eto Madagasikara ary 33.4% amin'ny totalin'ny fanondranana azy.
'Tarehy rahampitso' ao amin'ny fizahan-tany 'Mi Save Solo'
Bartlett dia mijery an'i St. Mary amin'ny fampandrosoana maharitra momba ny fizahan-tany any Jamaika